Gabaygii Wuu Dhintay!
Gabay waa hadalmurtiyeed taxan oo ka kooban beydad mid waliba isugu xidhan yahay laba qaar oo leh qaafiyad iyo miisaan ka dhexeeya. Gabaygu qaran ahaan waa Hadal, qabiil ahaan waa Suugaan, qoys ahaan waa Maanso, qof ahaanna waa Gabay. Hadal wuxuu kaga tegey waxii aan murti ahayn ee hadal uun iska ah. Suugaan wuxuu kaga tegey sheeko, maahmaah, khudbad, maqaal iyo majaajillo. Maansana wuxuu kaga tegey geeraar, jiifto, buraanbur iyo dhammaan noocyada heesaha (guuroowgu waa gabay luuq duwan, shiribkuna waa hees). Haddii uu hadalku yahay dhawaaq la isku afgarto oo ka sarreeya dhawaaqa xayawaanku isku afgarto, gabaygu waa heerka dhawaaqaas oo kor loo qaaday, laguna qurxiyey falsafad, khayaali iyo naaxiyad.
Dad suugaanta aqoon fiican u leh ayaa haddana magaca “maanso” ku kooba gabayga, geeraarka iyo jiiftada oo keliya. Taasi cilmi ahaan caqligal ma noqon karto. Tusaale ahaan maxaa kala duwaya buraanbur iyo geeraar aan ahayn hab-dhaca? Tix oo dhamina waa la xeer, sidaa darteed tix oo dhami waa in ay tahay ”maanso”, xataa heesta ilmahha lagu sabaaliyo.
Waxaa kale oo beryahan dambe gabay lagu sheegaa maansada oo dhan haddii aany muusig lahayn, maansada oo dhanna waxaa lagu sheegaa hees haddii ay muusig leh dahay, xataa gabayga. Mar kale tixda kale oo dhan waxaa lagu sheegaa maanso, gabaygana gooni ayaa loo saaraa. Labadaa arrimoodba in kasta oo ay cilmi ahaan qalad yihiin haddana waxba kuma jabna in lagu fududaysto. Waayo qofka aanay tani shaqdiisa ahayni kuma khasbana kala barashada noocyada maansada.
gardarniyaa maxaan Hodan Cabdullaay kaaga go’i waayey
Anshax ilaalinta macnaheedu ma aha in aan lagu dhiirran in wax cusub laga gabyo ama si cusub loo gabyo. Mana ah in hab-fekerka iyo hab-dhaqanka guud ee bulshada addoon loo noqdo, kaas oo laga yaabo in uu dambeeyo ama qaldan yahay.
Haddaba maansada kale ee aan gabayga ahayn waa aynu fahmi karnaa sababta loogu luuqaynayo, ama jiibta, jaanta, sacabka iyo qalabka la tumo loola miciinsado. Waayo munaasabad hawleed iyo mid cayaareed labadaba ereyada maansada waxaa la muhimmad ah amaba ka sii muhiimsan xamaasadda iyo xiisaha la rabo in jawiga lagu abuuro. Arrimahaana waxaa lagama maarmaan u ah naaxiyad iyo jiib macaan oo dareenka kicin kara. Dareenka sidaa loo kiciyey ayaa hawsha la hayo culayskeeda lagu illaawaa, farxadda lagu jiro loogu furfurmaa, madaddaaladana loogu riyaaqaa. Hooyadu marka ay ilmaha hees cod macaan ugu luuqayso wuu ku raaxaystaa dabadeed oohinta joojiyaa. Marka uu barbaar cod furani si yaab leh cayaar ugu dhufto gabdhaha la jooga kama tagaan kuwa maqanina kama raagaan. Xoolaha marka hees shubaal ah loo saaro darka ayey ku soo qamaamaan biyahana habsima u cabbaan. Xataa neef biyodiid ah haddii cod macaan loogu heeso waxay u badan tahay in uu cabbo.
1) In maqalka dhegeystaha lagu soo jiito lana abuuro jawi gabay.
2) In codka kor loogu qaado si loo wada maqlo.
3) In ereyada lagu jiidjiido si loo fahmo.
a) Marxaladdii finiinka
Magacaa waxaan ugu bixiyey in waxa laga hayaa ay yihiin finiin sebenkaa ka soo firdhay oo dirqi inagu soo gaadhey. Raage Ugaas ayeynu tixo dhawr ah ka naqaan, kaas oo lagu maleeyo laba boqol oo sano hortood. Sida la sheego Raage Ugaas waxaa la casri ahaa aw Muuse Ismaaciil Samatar oo loogu abtiriyo tix lagu magacaabo “Darbadaaley”. Labadaba waxaa ka sii shisheeya Ugaas Nuur Ugaas Rooble oo qarnigii 18-aad horraantiisii ku beegan. Waxaa kale oo cod dinniiq ahi inaga soo gaadhayaa gabadh la odhan jirey Geelo iyo nin ay iyada isu maansoon jireen. Intaba waxaa ka fac weyn tixo uu ugaas degaanka Awdal u dhashay far soomaali uu isagu samaystay ku qoray, taas oo ah qarnigii 17-aad. Dabadeed imaatinka reer yurub waxaa la jaanqaadday maansada Faarax Nuur. Intaa ka dib waxaa la soo galay taariikhda cusub.
b) Marxaladdii fadqalallada
3) Xilligaa loollaanka qabiilku wuxuu gaadhey heerka ugu sarreeya taas oo gabayga raad weyn ku yeelatay. Dagaalladii daraawiishta iyo natiijooyinkii kala duwanaa ee ka abuurmay waxay sii xoojiyeen ugana sii dareen qabyaaladda.
t) Marxaladdii waddaniga
j) Marxaladdii dib u noqoshada
Waa hubaal maanta gabayga in aan loo jeclayn sidii hore, taana sababteeda la iskuma raacsana. Dad baa u arka in gabaygii sal guuray oo la waayey gabyaa u dhigma raggii hore. Qaar kalena bulshada waqtigan ayey eedda saaraan oo ku tilmaamaan mid aan gabayga qiimayn. Laakiin labada aragtiyoodba xaqiiqo beeninaysa ayaa jirta. Gabyaa badan oo aan kuwii hore ka dhicin ayaa maanta nool, gabaygooduna kii hore kama tiro iyo tayo liito. Isla markaa bulshada maantu tii hore kama dookh xuma. Haddaba sababta gabayga looga xiisodhacay waa mid kale.
Beri fog ayuu nin soomaaliyeed tix gabay ah tiriyey. Mar kasta oo uu afar wax ka hadlo ama afar beyd dhammeeyo wuxuu ku hooriyey “Afartaa intaan alif ka maray meel ma ku adkeeyey”. Niman ka dambeeyey oo gabaygiisa jeclaa ayaa mar kasta oo ay gabyaan taa halhays ka dhigtay. Tusaale ahaan mid baa yidhi: “Afartaa af lama daaliyee erey xun ma u diiday.” Mid kale wuxuu yidhi: “Afartaa intaan miin ka maray meel ma ku hagaajey.” Sidaas ayaa caado laga dhigtay. Dabadeed markii dambe tix aan afar afar loo hoorin ayaa halqabsigaa la iskaga qurxistay. Tusaalahaa aniga ayaa sameeyey ee taariikh sugan ma aha, wuxuuse ka tarjumayaa xaqiiqo jirta. Waa dhif gabyaa soomaaliyeed oo aan qaladkaa iyo kuwa la midka ah gelini.
Waxaa kale oo iyadduna dhaliil weyn leh dabeecadda ah in goob la taagan yahay isla markaaba maanso laga curiyo, taas oo ah wax lagu faano la iskuna ammaano. Dadku maanso curinta waa ay ku kala dheerayn karaan, laakiin maansoyahanku ma aha nebi maansaduna ma aha waxyi samada ka soo dega, ee waa halabuur u baahan oddoros, erey xulasho iyo qurxin. Arrimahaasina waxay u baahan yihiin waqti iyo feker.
Haddaba ha la wada ogaado gabaygii markii ay waxaas oo cudur ahi isu biirsadeen ugu damabyn in uu dhintay. Ilaahay ha u naxariisto! Kuwa maanta maydkiisa riixaya ee socodka ku khasbaya dadaalkoodu waa hal bacaad lagu lisay. Gabayga ay maanta curiyaan haddii laga dhegaysto wax cusub laga fili maayo ee waa uun qaddarin loo hayo sooyaalk afka iyo dhaqanka. Haddaba bal in ay gabayga naftu ku soo noqoto ha lagula daalo saddex waxyaalood:
F.G: tixaha aan tusaalaha u qaatay beydadku sida ay u qoran yihiin isuguma xigaan.
QORAARADII HORE EE IBRAAHIM YUUSUF
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraga ku saxiixan.
Kulaabo Bogga Hore ee SomaliTalk.com